Lavazza Idola Igwe Kọfị - Imewe Mmewe
Igwe Kọfị Ngwọta zuru oke maka ndị hụrụ kọfị na-achọ ọmarịcha Italiantali espresso ụlọ n'ụlọ. Ihe mmetuta ihe mmetuta ihe metutere aka na nzaghachi akuko nwere ihe ntughari ya na okpomoku a na-ewusi otutu n’enye gi ihe omuma banyere ihe uto obula. Ngwaọrụ ahụ na-egosi mmiri na-efu, otu akpa nchekwa zuru ezu ma ọ bụ mkpa ọ dị maka ịrịda site na akara ngosi ndị ọzọ na-enwu n'ọkụ ma ọ bụ dopu draya nwere ike idozi ngwa ngwa. Ihe eji eme ya bu ihe mebere ya, ihe omuma ya na ihe omuma bu ihe omuma nke asụsụ Lavazza guzobere.
Aha oru ngo : Lavazza Idola, Aha ndị na-emepụta ya : Florian Seidl, Aha onye ahịa : Lavazza.
Igwe Kọfị Florian Seidl Lavazza Idola